Dad Shacab ah oo lagu laayay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Tuuryare 18 April 2019
Ugu yaraan 5 qof ayaa dhimatay ka dib markii Koox hubeysan ay weerar ku qaadeen dad Shacab ah oo ku sugnaa Suuqa Kaawo Godey ee degmada Wadajir.
Ku dhawaad 6 ruux ayaa sidoo kale ku dhaawacmay weerarkaasi, waxaana warar qaar ay sheegayaan in dadka la laayay qaarkood ay isku qoys yihiin.
Weerarka ayaa ka dhacay Guri ku yaalla Agagaarka Suuqa Koowo Goodey.
Maamulada degmooyika Wadajir iyo Dharkeenley ayaa goobta gaaray Waxaana Isku soo baxay Dadka Degaanka.
Sababta ka dambeysay in dadka Shacabka ah la laayo ilaa iyo hadda si rasmi ah looma xaqiijin karo, waxaana taasi ay cabsi weyn ku abuurtay dadka degaanka, waxaana goobta ka baxsaday Kooxdii dilka geysatay.